फेरी प्रधानमन्त्री देउवा बिरुद्ध खनिए पूर्वडिआइजी सिलवाल, सांसद समेत बनिसकेका उनी के फरार नै भएका हुन् त ? – Etajakhabar
फेरी प्रधानमन्त्री देउवा बिरुद्ध खनिए पूर्वडिआइजी सिलवाल, सांसद समेत बनिसकेका उनी के फरार नै भएका हुन् त ?
काठमाडौँ। पूर्वडिआइजी नवराज सिलवाल ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट सांसद त बने तर उनी सांसद बने लगत्तै प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्नका लागी तम्तयार बनेर बसेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा सरकारी कागज कीर्तेको अनुसन्धान अगाडि बढीरहेका बेला मंगलबार साँझ उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले पत्राचार गरेका बेला उनी मलेसियामा रहेको थाहा भयो ।
गत पुस ५ गते कीर्ते गरेको अभियोगमा जाहेरी दर्ता भएपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिरुद्ध अभिब्यक्ति दिइरहेका बेला प्रहरीले आँफुलाई) पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरेका बेला मलेसियाबाट नै फेरी देउवा बिरुद्ध खनिदै सिलवालले आँफु बिरुद्ध राज्य नै लागेको बताएका छन् । सिलवालले भनेका छन् काँग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीले नराम्रो हार बेहोरेको रिस आफूमाथि पोखेको भन्दै आक्रोस समेत पोखेका छन् ।
मलेसियाबाट सिलवालले यसबारे प्रतिकृया दिँदै भनेका छन् म आफ्नो नियमित कामका लागी यहाँ आएको हुँ । म फरार भएको होइन । ‘एसियन इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी’द्वारा आयोजित ‘इष्ट एसियन इनिसियटिभ्स इन द कम्युनिटी डेभलपमेण्ट विथ स्पेसल फोकस टु वुमन’ विषयक कार्यक्रममा भाग लिन मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर पुगेका सिलवालले केही मिडियाले आँफुलाई फरार भएको भनी समाचार प्रकाशित गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै भने म म भागेर यहाँ आएको होइन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष १९, २०७४ समय: १५:१८:५९